MediaTek na-ekwupụta Helio P95, Onye Nhazi na Mma AI na 4G | Gam akporosis
MediaTek na-ekwupụta Helio P95, onye nhazi ya na AI na 4G ka mma
Mediatek na-emezigharị ndị nhazi niile nke usoro ya dị iche iche, gụnyere usoro G, ọ bụ ezie na ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke usoro a maara dị ka PP. ihe nhazi ulo oru bu P95, mmelite nke P90 nwere ezigbo AI ma ọ bịarute ịbụ 4G, ya mere 5G tụfuru na ụdị a.
Zute Helio P95
El Helio P95 na-eji ntọala nke Helio P90, kwalite NPU na GPU kwalitero na arụmọrụ dị elu mgbe ị na-ebugharị eserese. Arụ ọrụ nke CPU a bụ 10% dị elu karịa ihe atụ ekwuputara na Disemba 2018, yabụ ọ dị mma maka igwe dị n'etiti.
The American ụlọ ọrụ na-agba mbọ ka na-agbakwunye ya Ai unit, na APU 2.0 nwere oke ọsọ ma kpọọ ya ka ọ rụọ ọrụ nhazi. MediaTek na-egosi na ọ bụ otu n'ime AI kachasị ike na ekwentị 4G.
N'agbanyeghị ị kpebiri na modem 4G LTE, Helio P95 na-ejide nke ọma ma a bịa n'ịrụ ọrụ nwere egwuregwu na ngwa. Ọ bụ nhazi asatọ, abụọ n’ime ha bụ ARM Cortex A75 na 2.2 GHz na isii ndị ọzọ bụ Cortex A55 na 2.0 GHz.
Ihe eserese ahụ bụ otu, kpọmkwem IMG PowerVR GM 9446, ma onye na-emepụta ihe kwuru na ọ ga-enye 10% n'elu nke egosiri na Helio P90. Ọ na-akwado ese foto ruo 64 MP, ndekọ vidiyo na pikselụ 3840 x 2160, ruo 8 GB nke LPDDR4x RAM, UFS 2.1 na mkpebi ihuenyo nke 2520 x 1080 pikselụ.
Njikọ ndị ahụ bụ otu: Wi-Fi 5 na Bluetooth 5.0, na-akpọ n'okpuru VoLTE \_ ViLTE \_ WFC ma na-akwado FM Radio agbakwunyere, ihe bụ isi na ekwentị. MediaTek chọrọ ịmalite mmelite dị mma nke a ga-ahụ n'oge na-adịghị anya na ngwaọrụ mbụ nke ụdị dị iche iche.
MediaTek enyela ụbọchị ọ bụla maka Helio P95 mmalite, ma na-atụ anya ịhụ ihe mbụ mobile ngwaọrụ na processor na-abịa ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MediaTek na-ekwupụta Helio P95, onye nhazi ya na AI na 4G ka mma
Gọọmentị ndị Spain ga-etinye nnukwu ihe mgbochi na igbe mkpọsa nke egwuregwu ahụ
LG V60 ThinQ 5G bụ gọọmentị: Snapdragon 865 na ngosi ihuenyo abụọ